कसले प्रयोग गर्नु हुदैन अस्थाई साधन कपर्टी ? जानीराखौ - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»कसले प्रयोग गर्नु हुदैन अस्थाई साधन कपर्टी ? जानीराखौ
कसले प्रयोग गर्नु हुदैन अस्थाई साधन कपर्टी ? जानीराखौ
By रिता घिसिंग on १ बैशाख २०७५, शनिबार ०८:०८ स्वास्थ्य/जीवनशैली
काठमाडौँ : आईयूसिडि अन्तर्गत कपरटी, लुप पर्दछन् । नेपालमा कपरटीको प्रयोग धेरै गरिन्छ । यो एकपटक लगाएपछि १२ वर्षसम्मलाई काम गर्छ । कपरटी पुरुषले थाहा नपाउने गरी प्रयोग गरिरहन सकिन्छ ।
यदि कपरटी बीचमा निकाल्नु परेमा पनि निकाल्न सकिन्छ । कपरटीको प्रयोग गर्दा महिनावारीको समयमा पेट दुख्ने, खुट्टाहरु, तिर्घाहरु दुख्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ महिनावारीको समयमा रक्तस्राव बढी हुन्छ । कपरटी राखिसकेपछि समय समयमा परीक्षण गर्नुपर्छ ।
४० वर्ष पुगेपछि डिपोप्रोभेरा, नरप्लान्ट, आईयूसिडिको प्रयोग गर्नुपर्छ । तर ४० वर्षपछि पिल्स भने खानु हुँदैन । पिल्सले ४० वर्ष पुगेपछि उच्च रत्तचाप बढाउने, ह्दयघात हुने सम्भावना हुन्छ ।
प्रयोग नगर्ने अवस्था : गर्भ रहेको बेला वा गर्भको शंका लागेमा , कुनैबेला पाठेघर वा नलीको संक्रमण भएमा , कुनैबेला डिम्बबाहिनी नलीमै गर्भ रहेर समस्या परेको भए , महिनावारी हुँदा अत्यधिक रक्तस्राव वा पिडा हुँदा , रक्तअल्पता भएमा , कहिल्यै गर्भवती नभएको भए
परिवार नियोजनका अस्थायी साधनमा कण्डम, पिल्स, डिपोप्रोभेरा, नरप्लान्ट, आईयूसिडि, डायफ्राम पर्दछन् । कण्डम महिला र पुरुष दुवैले प्रयोग गर्न सकिन्छ । परिवार नियोजनको साधनमा कण्डम सबभन्दा उत्तम अस्थायी साधन हो । यसको प्रयोग राम्रोसँग गर्न सकेमा असफल दर पनि कम हुन्छ । साथै यौनजन्य रोगबाट पनि बचाउँछ । कण्डमलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न नसकेको खण्डमा भने असफल हुने संभावना १८ प्रतिशतसम्म हुन्छ ।